I-BlackBerry Key2 LE ifika ngokusemthethweni eSpain | I-Androidsis
Ekupheleni kuka-Agasti, ngexesha le-IFA 2018, iBlackBerry Key2 LE yaziswa ngokusemthethweni. Isixhobo apho uphawu lwenze ukubuyela kwimodeli ngekhibhodi ye-QWERTY, ngokungathandabuzekiyo eyona nto iphambili kuyo. Sele sithethile nawe kwinkcazo-ntetho yayo malunga neenkcukacha zayo ngokupheleleyo, ke ayigcini mfihlo nakubani na.
Ngoku ukufika kwale BlackBerry Key2 LE eSpain sele kubhengeziwe. Intengiso apho iifowuni zohlobo lwazo zazithandwa kakhulu kwiminyaka emininzi eyadlulayo. Umbuzo ngowokuba ingaba le modeli iya kukwazi ukufumana indawo yentengiso ye-Android, enkosi kubukho bebhodi yezitshixo.
Iinguqulelo ezimbini zeBlackBerry Key2 LE ziya kuphehlelelwa ngokusemthethweni eSpain. Ke abasebenzisi kuya kufuneka bakhethe phakathi kwenguqulelo efanelekileyo kubo. Umahluko uyakuba kukuba omnye wabo abe ne-SIM enye kwaye nokugcinwa kwangaphakathi kuya kwahluka kuzo zombini iimeko.
Into ebizwa ngokuba yiSlate Version iya kuba ne-SIM enye kunye nokugcinwa kwangaphakathi kwe-32 GB. Ixabiso lale nguqulo liya kuba ngama-399 euros, ukuba zitshiphu kwezi zimbini. Kwelinye icala sinenguqulo yeChampagne, eza ne-SIM ezimbini kunye nokugcinwa kwangaphakathi kwe-64 GB, ngexabiso lama-euro angama-429.
Njengoko bekulindelekile, le BlackBerry Key2 LE entsha ayizukubiza. Into eya kuthi ngokuqinisekileyo iwabeke phantsi amathuba akho okuthengisa ngakumbi kwimarike yesizwe. Kodwa kuya kufuneka sibone ukuba abathengi baseSpain bayifumana njani le fowuni intsha, kunye nekhibhodi kunye ne-Android njengenkqubo yokusebenza.
Ukuphehlelelwa ngokusesikweni kweBlackBerry Key2 LE kuya kwenzeka nge-12 kaNovemba. Kwabo banomdla, sele ikhona ukubhukisha kwiwebhusayithi yenkampani.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » IBlackBerry KEY2 LE ifika eSpain